कसले मौसम परिवर्तनको नराम्रा परिणामहरु बाट सबैभन्दा खराब पीडित हुनेछ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
कसले मौसम परिवर्तनको नराम्रा परिणामहरु बाट सबैभन्दा खराब पीडित हुनेछ?
मौसम परिवर्तनले विश्वको सबै भागलाई उस्तै तरीकाले असर गर्दैन। प्रत्येक इकोसिस्टम र ग्रहको प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नै आकृति हुन्छ विशेषताहरू, यसको जलवायु र यसको जनसंख्या सन्तुलन। त्यसकारण हाम्रो अगाडि प्रश्न यो छ: मौसम परिवर्तनको सबैभन्दा खराब कारणहरू कसले भोग्ने छन्?
यदि तपाईले पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ कि को नराम्रो नतिजा भोग्दछ भने, पढ्नुहोस्।
1 मौसम परिवर्तनको नतीजाहरु
2 बराबर फुटि??
3 समस्याको समाधान
मौसम परिवर्तनको नतीजाहरु
बिहार (भारत) मा, कष्टको सम्भावना बाढी बढी छ, भूभागको मोर्फोलोजी र प्रशस्त र मुसलधारे वर्षा दिइयो। तिनीहरूको अर्थव्यवस्था खेतीमा आधारित छ र यसबाट तिनीहरूले आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्छन्। प्रत्येक वर्ष, मानसून वर्षा आउँछ जसमा नदीहरू उठ्छन् र बालीनालीको विनाशको खतरा हुन्छन्, तर त्यसो भए पनि, तिनीहरू परिवारको अस्तित्वको लागि जोखिम लिन तयार छन्।
वर्षाको अन्तमा विनाश भयोबालीनाली र घर भग्नावशेषमा थिए। यस अवस्थाका कारण तिनीहरू कमजोर गुणस्तरीय रोजगारहरू खोज्न शहरहरूमा भागे। जब अर्को वर्ष आयो, तिनीहरू पहिलेभन्दा पहिले गरीबमा फर्के, तर फेरि छर्नका लागि तयार छन्।
र यो हो कि यी किसानहरू प्रकृतिको कुनै पनि घटनाको लागि तयार छैनन्, हुनसक्छ मौसम परिवर्तनले जस्तै सुख्खा, बाढी वा रोगको ठूलो प्रसारबाट प्रेरित भएको हो। यी किसानहरू यस्ता घटनाहरूको सामना गर्न सक्षम छैनन्, किनकी उनीहरू प्रयोग गर्दैनन् प्रतिरोधी बीउ छैन, कुनै मल वा जडिबुटी छैन जसले उनीहरूलाई सबैभन्दा प्रतिकूल परिस्थितिबाट बचाउँछ।
मौसम परिवर्तनले गर्मी तापमानको वृद्धिले उनीहरूको जीवनशैलीलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ। मौसम परिवर्तनले ठूलो खडेरी र बाढीलाई बढाउनेछ, बालीलाई बढ्नबाट रोक्छ, विशेष गरी उष्ण प्रदेशहरूमा। साथै, उच्च तापक्रमको साथ, कीराहरू अझ राम्रो मौसममा र फसलहरू मार्न सक्छ।
यो अस्वीकार गर्न सकिदैन कि धनी देशहरूले पनि मौसम परिवर्तनको नतिजा भोग्नुपर्नेछ, किनकि यसले सबैलाई असर गर्छ। यद्यपि सबै भन्दा विकसित देशहरूसँग उनीहरूसँग अनुकूलन गर्न सक्षम हुन तिनीहरूसँग आवश्यक संसाधनहरू छन्। तिनीहरू जस्तो नभई, गरिब किसानहरूसँग यी उपकरणहरू छैनन् जसले मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ। तसर्थ, तिनीहरू ती व्यक्तिहरू हुन् जसले यी प्रभावहरूबाट सर्वाधिक पीडित हुनेछन्।
यी क्षेत्रहरूले मौसम परिवर्तनको प्रभावलाई अत्यन्त तीव्रताका साथ कष्ट दिन्छन्, निश्चित रूपमा जब संसारलाई निरन्तर बढ्दै गइरहेको जनसंख्यालाई पोषण दिन पहिले भन्दा तपाईंको सहयोगको आवश्यक पर्दछ। विश्वको जनसंख्याले जस्तै खाद्यान्नको माग लगातार बढिरहेको छ। यो अनुमान गरिएको छ कि २०० सम्म माग 60०% ले बढ्नेछ।
विश्वव्यापी खानालाई ध्यानमा राख्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण कारक हो र यसको कमीले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई जाँचमा राख्न सक्छ। यसले भोकमरी बढाउन सक्छ र गरिबीको बिरूद्ध हालैका दशकहरूमा विश्वले गरेको प्रगति गिरावट आउन सक्छ।
जे होस् सबै चीज यति कालो देखिन्छ, त्यहाँ समाधानहरू छन् जुन प्रायः सरकारहरूको निर्णयहरूमा निर्भर हुन्छ। तिनीहरूले स्वच्छ उर्जामा लगानी गर्नुपर्दछ, ऊर्जा दक्षतामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र तापक्रममा यो वृद्धिलाई ढिलो गर्नुहोस्।
ग्लोबल वार्मिंगका नतिजाहरूबाट बच्न असम्भव छ, यदि हामीले अबदेखि सफा उर्जा मात्र प्रयोग गर्न थाल्यौं भने। जीवाश्म ईन्धन प्रयोग गर्ने बानी त्याग्न यो जटिल कुरा हो।
तर सबै समाचारहरू खराब छैनन्। त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन आवश्यक छन् र ती अनुकूलन गर्न सजिलो छ। तिनीहरूले मद्दत गर्न सक्छन् खाद्य उत्पादन, अधिक आम्दानीका लागि, आदि यो वित्त पहुँच गर्न को बारे मा एक सुधार को बारे मा छ, प्रतिकूल परिस्थितिहरुमा सुधारिएको बीउ प्राप्त गर्न, धेरै प्रदूषण छैन मल र उनीहरु उनिहरु सबै बढ्न बेच्न सक्छन् जहाँ बजार।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » कसले मौसम परिवर्तनको नराम्रा परिणामहरु बाट सबैभन्दा खराब पीडित हुनेछ?
मौसम परिवर्तनको दुई गति
नोभेम्बर २०१:: स्पेनको खडेरीको महिना